नेपालकै पहिलो संस्कृत पाठशाला संकटमा
संखुवासभा । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकामा रहेको नेपालकै पहिलो संस्कृत पाठशाला संरक्षणको अभावमा जीर्ण बनेको छ। जनस्तरबाट स्थापना भएको संस्कृत पाठशाला संरक्षण नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको छ।
वि. सं. २०७२ सालमा गएको भूकम्पले क्षति पुगेको उक्त पाठशाला संरक्षणमा ध्यान नदिँदा जीर्ण बनेको हो। ऐतिहासिक पाठशाला जीर्ण हुँदासमेत सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको स्थानीयको भनाई छ। षडानन्द नगरपालिकामा शिक्षाका ज्योति ब्रह्मचारी षडानन्द अधिकारीले १९३२ सालमा स्थापना गरेको संस्कृत पाठशाला संरक्षणको अभावमा जीर्ण बनेको हो।
यस संस्कृत पाठशालामा तत्कालीन समयमा देशको पश्चिम नेपालका गुल्मी, सल्यान, प्युठानसम्म र छिमेकी मुलुक भारतको सिक्किम तथा आसामबाट समेत विद्यार्थी गुरुकुल शिक्षा लिन आउने गरेका पाठशालाका व्यवस्थापक तोयानाथ गौतमको भनाइ छ। तर अहिले पाठशालाको भवन भत्कने अवस्थामा रहेको छ। पाठशाला संरक्षणको लागि षडानन्द सीताराम गुठी स्थापना गरिएको भए पनि त्यसले काम नगेरको पाठशालाका व्यवस्थापक गौतमले आरोप लगाए। षडानन्द सीताराम गुठीको करिव २०० रोपनी जमिनमा धेरै जसो जमिन बाँझो नै रहेको बताए।
षडानन्द सीताराम गुठीले केही पनि सहयोग नगर्दा अहिले पाठशालामा रहेको २६ जनाको संख्यामा रहेका वटुकहरूलाई खुवाउन तथा व्यवस्थापन गर्न समस्या उत्पन्न भएको व्यवस्थापक गौतमले गुनासो गरे। उनले भने गुठीले मात्र होइन यही रहेको नगरपालिकाले समेत पाठशालाको समस्या नबुझेको बताए। गौतमका अनुसार अहिले पाठशाला मुठी दानको भरमा सञ्चालनमा रहेको छ। गुठी परिसरमा रामचन्द्र, नर्मदेश्वर, शिवालय र पशुपतिका चारवटा मन्दिर जीर्ण अवस्थामा छन्।
वटुकहरूका लागि खाने तथा बस्ने छात्रावासको व्यवस्था रहेको भए पनि छात्रावास जीर्ण बनेकोले समस्या देखिएको छ। उता षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख वीरबल राईले भने पाठशालाको संरक्षणका लागि काम भइरहेको बताएका छन्। प्रमुख राईका अनुसार नगरपालिका, पुरातत्व विभाग र षडानन्द गुठीबीच छलफल भई सकेको र चाँडै जीर्णद्धारको काम अगाडि बढ्ने बताए।